Litecoin Uru N'ime Bitcoin - Oke Magazine - pisklak.net
Litecoin Uru N’ime Bitcoin – Oke Magazine
Litecoin na-ebute ụzọn’etiti cryptos. Taa, anyị na-enyocha ọ joyụ nzuzu d e okporo ụzọ Litecoin, nke onye okike ya bụ Charlie Lee tinyebere nke ọman’otu oge:”Chee echiche na ọ bụ okporo ụzọ abụọ: Taa, Bitcoin juputaran’ụgbọala na Litecoin bụ ihe efu. N’agbanyeghị na Bitcoin juru n’ọnụ, ụgbọala ndị na-agaghị abịa iji Litecoin okporo ụzọ taa n’ihi na ọ na-abụghị na ya si na-achọghị na-aga gafee. Lightning Network ga-arụ àkwà mmiri n’okporo ụzọ awara awara. Ma abamuru un bụ na akwa ndị a ga-ejikọ okporo ụzọ abụọ ahụ ọnụ.” Oge eruola iji chọpụta uru Litecoin.
Gịnị bụ Litecoin (LTC)? )
Litecoin pụtara na 2011 dị ka ụdị nke Bitcoin. Ọ bụ ka taa onye nke un kasị ewu ewu na ndụdụ. Okike nke Litecoin bụ Charlie Lee, a mbụ Google ọrụ.
Litecoin bụ ihe kachasị ewu ewu maka ọsọ ọsọ un t ọnụ ahịa azụmahịa dị oke ala.. Ndị a mejupụtara isi Litecoin uru. Agbanyeghị, uru ndị a nwere echiche miri emi nke na-eme ka Litecoin bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ karị, anyị ga-enyocha ha ebe a.
Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ cryptos, Litecoin bụ ihe na-emeghe, self ego nke ndị ọgbọ, na nke zuru ezu. Okwu ndị a niile nnukwu ụda dị nro na-ezo aka n’echiche dị mfe nghọta. N’ụzọ bụ isi, ọ pụtara na onye ọ bụla nwere ike itinye aka na mmepe un, t enweghịkwa onye isi na-achịkwa ọnọdụ ya, mgbanwe ya, wdg.
Litecoin Uru tụnyere Bitcoin
O nwere ike iju gị anya ịmata na Litecoin bụ 4 ugboro ngwa ngwa karịa Bitcoin. Ọ na-ewepụkwa self love na-eduga crypto mgbe ọ bịara na ụgwọ azụmahịa dị ala:
Itinye ego na Litecoin ruru ihe ekweghị ekwe 100 ugboro pere mpe ma e jiri un tụnyere Bitcoin,n’ihi ụgwọ azụmahịa dị oke ala..
Ọzọkwa, Litecoin bụ ike scalable. Gị, dịka onye na-etinye self love, nke a pụtara na ịkwụ ụgwọ gị nwere ike ịhazi ya ngwa ngwa karịa ka ọ dị d e mbụ:
Litecoin bụ 4 ugboro ngwa ngwa karịa Bitcoin n’ihi na ọ nwere ike kọọrọ hazie ihe dị ka azụmahịa 56 kwa nkeji. Nke a gbagwojuru crypto ọ bụla ọzọ taa. Ma ọ gwụbeghị! Oge nkwenye dị mkpirikpi na-eme ka nchebe nke azụmahịa ahụ dịkwuo elu, yabụ anyị nwere ike ikwu n’enweghị nsogbu na Litecoin na-aghọ otu n’ime mkpuchi kachasị mma n’oge a.
Next, ọnụ ọgụgụ nke Litecoin nkeji bụ 84 nde mkpụrụ self explanatory, nke bụ ụzọ karịa Bitcoin si elu ịgba nke nde mmadụ 21:
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke LTC na-enye crypto a uru nke uche, ebe anyị ka na-ahụ ma ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nkeji ga-eme ka ọnụahịa ahụ belata, n’ikpeazụ.
Litecoin bụ ezigbo crypto. Iji mee ya n’ụzọ dị mfe:
Ndị ọrụ adịghị mkpa ịdabere na nke atọ iji hazie ịkwụ ụgwọ ahụ, dịka ụlọ akụ, dịka ọmụmaatụ. Ya only, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ ahịa efu.
Netcoin netwọkụ ghere oghe maka onye ọ bụla. Na Bekee doro anya na nke a na-ezo aka:
Netwọk nke na-enye ohere ka onye ọ bụla n’ụwa mee mgbanwe na protocol, ọ bụkwa ezigbo ihe. N’ihi gịnị? N’ihi na anyị na-achọ mgbanwe mgbe niile na protocol iji mejuputa ya, ka anyị niile miniature nwee ike ịmekọrịta d e mkpa ahịa ma mee ka ihe na-aga nke ọma.
Litecoin na cha cha Oke
Oke cha cha Crypto Oke na-akpọ gị ka ị nwalee nhọrọ nkwụnye self kachasị mman’oge a miniature hụ yan’onwe gị. Anyị nweren’uche otú ihe I ji ihe gị self service gị,n’ihi d e anyị na-eche otu ihe ahụ.
Litecoin uru dị ọtụtụ ịleghara anya ma ghara irite uru na ya. Ya only, mee ngwa ngwa na Cashier anyị ma mee ka anyị mata echiche gị.